Sorona Masina ny 16/10/2018 - Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 16/10/2018
Gal. 4, 31b — 5, 6
Tsy mampaninona izay famorana na tsy famorana, fa ny finoana ampiasain’ny fitiavana ihany no izy.
Ry kristianina havana, tsy zanaky ny mpanompo isika, fa zanak’olona afaka. Efa navotan’i Kristy ho amin’ny fahafahana isika, ka mijoroa amin’izany, fa aza mety hampidirina amin’ny jiogan’ny fanandevozana intsony. Izao no lazaiko, izaho Paoly, aminareo: Raha mety hoforana ianareo, dia tsy hahasoa anareo na dia kely aza i Kristy. Eny, averiko indray amin’ny olona rehetra manaiky hoforana fa vao mainka koa voafehy hanatanteraka ny Lalàna rehetra aza izy. Fa tafasaraka amin’i Kristy ianareo rehetra mitady fahamarinana amin’ny Lalàna, ka lavo niala tamin’ny fahasoavana ianareo. Izahay kosa dia amin’ny Fanahy sy noho ny finoana no iandrasanay ny fanantenana ny fahamarinana; satria ao amin’i Kristy Jesoa dia tsy mampaninona izay famorana na tsy famorana, fa ny finoana ampiasain’ny fitiavana ihany no izy.
Salamo 118, 41 sy 43. 44 sy 45. 47 sy 48
Ho tonga amiko anie, ry Tompo, ny hatsaram-ponao.
Ho tonga amiko, ry Tompo, ny hatsaram-ponao: dia ny famonjenao araka ny teninao! Aza alàna amin’ny vavako ny tenim-pahamarinanao: fa ny satanao no antenaiko.
Izaho mitandrina ny lalànao lalandava, ka ho mandrakizay antaranoana. Miriaria an-kalalahana aho satria mikaroka ny Lahatrao.
Ny firavoako dia ny baikonao, izay mamiko aoka izany! Ny baikonao no fanandratako tanana; ny fitsipikao no fifaliako
Rôm. 1, 16-25
Nahalala an’Andriamanitra izy ireo nefa tsy nankalaza Azy ho Andriamanitra.
Ry kristianina havana, tsy menatra ny Evanjely aho, satria herin’Andriamanitra izany ho famonjena izay rehetra mino, dia ny Jody aloha, vao ny jentily. Fa ambara mazava ao aminy ny fahamarinan’Andriamanitra avy amin’ny finoana ho amin’ny finoana, araka ny voasoratra hoe: “Ho velona noho ny finoana ny olo-marina.” Fa hita miharihary avy any an-danitra ny hatezeran’Andriamanitra, mamely ny tsy fanajana an’Andriamanitra sy ny tsy fahamarinan’ireo olona izay misakana ny marina amin’ny tsy fahamarinany, satria miseho miharihary ao aminy izay mba mety ho fantatra momba an’Andriamanitra, fa nasehon’Andriamanitra taminy izany. Fa ny fombany tsy hita, toy ny fahefany mandrakizay mbamin’ny maha-Andriamanitra Azy, dia hitan’ny saina amin’ny asan-tanany ka miseho amin’ny zava-boaary rehetra; koa tsy afa-miala tsiny izy ireo, fa nahalala an’Andriamanitra izy, nefa tsy nankalaza Azy ho Andriamanitra na nisaotra Azy; fa nanjary zava-poana izy tamin’ny fisainany, ary tonga maizina ny fony donto. Nihambo ho hendry izy, ka tonga adala, fa ny voninahitry ny Andriamanitra tsy mety lò, dia nosoloany sarin-javatra mety lò, toy ny olombelona, na ny vorona, na biby mandady tongotra efatra, na biby mikisaka. Noho izany, dia navelan’Andriamanitra izy ireo hoentin’ny filan-dratsin’ny fony ho amin’ny fahalotoana, mba hifanala baràka amin’ny tenany ary nosoloany lainga ny fahamarinan’Andriamanitra, ary naleony ny zava-boaary no nivavahana sy notompoina toy izay ny Nahary izay isaorana mandrakizay. Amen!
Ny lanitra mitanisa ny voninahitr’Andriamanitra.
Tsy teny lazainy, tsy volana ambarany, tsy feo mba manako ho renesin’ny sofina: kanefa dia tsinjo eran-tany ny baikony; miely tsy tana ny hafatra entiny.
Lk. 11, 37-41
Manaova fiantrana araka izay anananareo, dia hadio ho anareo ny zavatra rehetra.
Tamin’izany andro izany, dia nisy Farisianina anankiray nanasa an’i Jesoa hisakafo ao aminy, ka niditra Izy dia nipetraka nihinana. Fa velona eritreritra ilay Farisianina nahita itý Izy tsy nisasa alohan’ny fihinanana, ka hoy ny Tompo taminy: “Ianareo Farisianina kosa iky mandio ny vohon’ny kapoaka sy ny lovia, kanefa ao anatinareo feno halatra sy faharatsiana. Ry adala, moa izay manao ny vohony tsy manao ny atiny koa? Izao ihany: manaova fiantrana araka izay anananareo, dia hadio ho anareo ny zavatra rehetra.”
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0239 s.] - Aidé par Evanjelyanio.org